Tafasaraka tamin'ny HMF ny Vondrona Kristiana
2010-10-21 @ 23:10 in Finoana
Mety ho hitantsika any amin'ny sehatra hafa any fa hisy fotoana nomen'ny fikambanana antsoina hoe Vondrona Kristiana lazaina ho misolo ny HMF hotontosaina ny Asabotsy 23 Oktobra 2010 ho avy izao eny Antsahamanitra. Maro moa no manontany tena hoe fa iza avy no ao amin'ity fikambanana ity ary manao ahoana ny tanjony? Ataoko fa amin'io andro io avokoa no mety hahafantarana bebe kokoa momba azy. Ny zavatra azo singanina kosa anefa dia tsy miara-dia amin'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana intsony ity Vondrona Kristiana ity na dia misy aza ny gazety milaza fa misolo ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ny fikambanana.
Taorian'ny raharaha 20 mey 2010 dia voatery niafina avokoa ireo mpitarika tao amin'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana. Ireo izay tsy notadiavina kosa nanohy tsimoramora ny hetsika na dia somary lefy kokoa aza ny heriny. Fotoana vitsy taty aoriana dia nanapa-kevitra ireto karazana vato namelan-kafatra fa misy amboarina kely ny rafitra nitantanana ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana, ampandraisina anjara bebe kokoa amin'ny fitarihana ny Lahika, dia novaina ihany koa ny anarana ka natao hoe Hetsiky ny Mpitory Fahamarinana indray. Tsy nankasitraka izany fanovana anarana izany, sy ny karazana fanovana rafitra tsy nifampierana izany, ny mpitarika ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana... sady nanorina rahateo ny Hetsika.
Tsy nitovy ny tadin-dokanga nanomboka teo satria karazana famadihana avy hatrany ny Hetsika ilay fanovana anarana tsy nifampierana tamin'ny mpikambana rehetra tao anatiny, ary tsy nifampierana tamin'ireo mpanorina indrindra indrindra. Faharoa, karazan'ny fampilazana fa vita hatreo ny amin'ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana no anton'ilay fanovana anarana nefa tsy novana ny famantarana. Notakian'ny tany ampiefenana ny hanambarana amin'izy ireo ny tatitra ara-bolan'ny Hetsika saingy fahatezerana sy fisintahana no setrin'izany. Amin'izao fotoana izao raha efa nanambara ny hiditra amin'ny Hetsika indray ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana dia ny Vondrona Kristiana novaina avy amin'ny Hetsiky ny Mpitory ny Fahamarinana indray no hanatontosa izany etsy Antsahamanitra. Dia miandry izay ho tohiny aho hoe hanao ahoana tokoa re ny hataony ary?
Jentilisa, Zoma 22 oktobra 2010 amin'ny 01:08